Dibadbax looga soo hor jeedo kooxda TPLF oo ka socda jigjiga. - Wardeeq 24 TV Dibadbax looga soo hor jeedo kooxda TPLF oo ka socda jigjiga. Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Dibadbax looga soo hor jeedo kooxda TPLF oo ka socda jigjiga.
Dibadbax looga soo hor jeedo kooxda TPLF oo ka socda jigjiga.
Qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan Caasimadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa saaka isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee magaalada jigjiga, si taageero ugu mujiyaan ciidamada kala gedisan ee dagaalka kula jira jabhadda TPLF isla markaana lagu canbaareenayo gulufka Falaagada TPLF ay ku hayso deeganada dariska la ah ee Canfarta iyo Axmaarada.
Madaxda deegaanka oo ka qeyb galaya dibad baxaan lana hadlayay shacabka ayaa ka hadlay hagardaamooyinkii ay TPLF u geysatay shacabka Deegaanka Soomaalida.
Banaabaxyo kan la mid ah ayaa ka dhacayay Toddobaadyadii la soo dhaafay Caasimadda dalka Itoobiya ee Adis Ababa iyo deegaano kale oo ka tirsan isla dalkaas.
Mustafe Muxumed Cumar, Madaxweynaha Deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo madashaas ka hadlay ayaa sheegay in TPLF ay ku andacooneyso hadda in ay soo celinayso nidaamkii Federalka qoomiga ah ee ay ku guuldarersatay hirgalintiisii 27 kii sano ee ay xukunka heysteen.
Previous articleBudhcad badheedh wareertey markab marayaayey bada muqdisho.
Next articleTuug budhcad ah oo lagu Toogtey magaalada muqdisho.